Maalinta: 18 November 2019
Xadgudubyada ka dhaca Kocaeli waxay dhaheen 'Maya ku xadgudubka Haweenka'; Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, 15-30 inta u dhaxaysa Noofembar 2019, Dr. Sadık Ahmet iyo Bülent Ecevit waxay muujiyeen xad gudubka sida midabka rabshadaha ka dhanka ah haweenka adduunka. [More ...]
Helitaanka Weyn ee Ardayda Ankara; Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara Magaalo Weyn, wuxuu sii wadaa hirgelinta codsiyada u fududeeya nolosha ardayda ku nool magaalada caasimadda ah. Waxaa markii ugu horreysay laga furay magaalada Ankara amar ka soo baxay Madaxweyne Yavaş oo xadka da'da uu ahaa [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ee Magaalada Centerubuk Xarunta Nolosha Qoyska, 81. Marka la eego baaxadda sannad-guurada sanad-guurada, waxay abaabushay Tan Meetma La kulanka Tandem Baaskiilka ”, kaasoo loo yaqaanay laba-baaskiil oo magaalada Çubuk ah. Markii ugu horreysay ee aad fuushan baaskiillada tandem [More ...]